Eegumsi Baqattootaaf Godhamu Haala Yaaddessaa Irra Jira
Onkoloolessa 04, 2011
Jarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa waggaa kan walga’iin dhimma baqattootaa itti jalqabame kan bara 1951 fi waggaa 50ffaa gumiin bara 1961 kan lakkoobsa biyya dhabuu gad xiqqeessuu jedhu itti geggeeffame ayyaaneffatee jira.
Tokkummaa mootummootaatti komishinerri ol aanaan dhimma baqattootaa Antoniyoo Guteres akka jedhanitti waggoota sadan darban keessa haalawwan yeroo hatattamaa ijoon sadii mudachuun isaa dandeetti UNHCR fi jaarmoliin ka biroo uummata miliyoonaan laka’amu kan gargaarsa barbaaduuf deebii kennuu isaa qormaata keessa galchee jira.
Hookkara filannoo xumura bara 2010 Ivory Coast keessattti geggeessameen booda baqattoota kuma 200 ol ta’antu biyyattii keessaa dheessan kanneen kuma hedduutti laka’aman immoo biyyuma ofii keessatti qe’ee irraa godaanan.
Sochiin uummataa Africa kaabaa keessatti ta’es itti aansuun dhufe jedhan Guteres. Gabaasa guutuu MP3 tuquun dhaggeeffadhaa